Ngabe floor solid izinkuni kulula ukuyigcina? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ngabe floor solid izinkuni kulula ukuyigcina?
Ngabe floor solid izinkuni kulula ukuyigcina?
Hlela: UDenny　2019-12-05　Iselula
Kulezi zinsuku, imindeni eminingi yanda isebenzisa ukufakwa kwamapulangwe ekuhlobiseni, kodwa ukuthi ilungiswa kanjani phansi kokhuni bekulokhu kuyinto ekhanda. Asilandele kanye nomhleli.
Okokuqala, lapho usebenzisa izinkuni phansi, kungcono ukugwema ukuletha izinhlayiya zesihlabathi egumbini.Izinye izinhlayiya zesihlabathi zizoletha phansi, ezizogqoka phansi. Khumbuza wonke umuntu ukuthi akusizi ukuthi ungenise isihlabathi esingcolile kakhulu, esizodala ukugeleza kokukhula. Ngakho-ke, isihlabathi esilethwa egumbini kufanele sisuswe ngesikhathi. Ngokuvamile, asikho isidingo sokuhlanza nge-vacuum cleaner, futhi asikho isidingo sokukhathazeka nge-warping ne-isikhutha okubangelwa umswakama.
2. Ngemuva kweminyaka emithathu noma emihlanu yokusebenzisa, uma kukhona ukuhlukunyezwa ezingxenyeni ngazinye, ungayenzela endaweni yangakini, okungukuthi, faka kabusha umala engxenyeni leyo. Indlela le ilula. Beka ngobumnene ingxenye ebanzi nge-sandpaper ukuze ususe ukungcola okungaphezulu. Ngemuva kwalokho usule ngobumnene ngendwangu ethambile eyomile, uphinde usebenzise i-coating, noma ufake ifilimu le-polyester engxenyeni leyo.
3. Ukuze uthole izinkuni eziqinile phansi ezakhiwe ngopende ongaphezulu, ungafaka i-floor wax kanye njalo ezinyangeni eziyisithupha. Ukugcotshwa kwe-Cork nge-resin emelana ne-abrasion ebusweni kulula ukunakekela njengokufaka phansi kwe-laminate. Vimbela ukulimala okushisayo. Musa ukubeka izinto ezishisayo ezifana nezindebe zamanzi ashisayo ngqo phansi, ukuze ungalimazi ifilimu lokupenda elingaphezulu. Ngasikhathi sinye, zama ukugwema ukukhanya kwelanga ngqo phansi isikhathi eside, ukuze ugweme ukomiswa ngaphambi kwesikhathi nokuqhekeka kwefilimu yopende ngemuva kwemisebe ye-ultraviolet yesikhathi eside eqinile.
Okwesine, ifenisha ingabekwa kuphela phansi amahora angama-24 ngemuva kokuba kufakwe phansi, futhi ukunyakaza kwabantu kuyo kufanele kuncishiswe kungakapheli amahora angama-24. Lapho ungekho ekhaya, sicela uvale amafasitela neminyango, ikakhulukazi imishini yokungena, ukuze ungagcobhozi phansi phansi ngokhuni noma ngemvula.
5. Lapho ugcina phansi ngokhuni, musa ukukuhlanza, uyihlambe noma uyihlanze nge-decontamination powder. Imvamisa kudingeka kuphela ukuwina nge-wrung mop noma i-rag. Susa izindawo okuhlanzeka kuzo nge-cleaner ekhethekile. Gwema ukuthonya okuqinile phansi kokhuni. Lapho uhambisa ifenisha, kusizakala ukuyiphakamisa. Awukwazi ukuyihudula ngqo.
Ngabe floor solid izinkuni kulula ukuyigcina? Okuqukethwe okuhlobene
Uyini umehluko phakathi kwe-multi-layer solid solid flooring floor kanye ne-three-layer solid solid flooring
Mayelana nesendlalelo esingaphezulu (1) Umehluko wokuqina Ingqimba eqinile yezinhlaka ezintathu ezihlanganisiwe inobukhulu obungama-millimitha ayi-3, futhi ububanzi obungaphezulu ngokuyisisekelo bung...
Ungayigcina kanjani phansi izinkuni
1. Ngemuva kokuba isitezi sokhuni sithengiwe futhi safakwa, ukulungiswa kwansuku zonke kubaluleke kakhulu ngesikhathi sokusebenzisa isikhathi eside, okuthinta ngqo impilo yenkonzo yaphansi. Noma i-la...
Ungayigcina kanjani i-bamboo nokhuni phansi
Gcina umoya omncane Ukugcina njalo umoya wangaphakathi ungashintshanisa umoya omanzi ngaphakathi nangaphandle. Ikakhulu uma kungekho ophilayo futhi onakekela isikhathi eside, ukufakwa komoya ngaphaka...
Ungayigcina kanjani ipulasitiki phansi
Ukubekwa phansi kwepulasitiki kunezinzuzo zokuba ezomnotho, ezimibalabala, ezokulwa namagciwane, ezingatheleleki, ezithinta imisindo futhi zikhululekile. Kuthandwa ngabanikazi bomhlobiso, ngakho-ke k...
Kuyini floor of cork futhi kunezinhlobo eziningana?
Ukubeka phansi ukhokho: I-Cork ungqimba oluvikelayo lwe-oak yaseChinese, okungukuthi, amagxolo, aziwa ngokuthi yi-oak cork. Ubukhulu bekakhokho ngokujwayelekile bungu-4,5 mm, kanti ukhokho osezingeni...
Yiziphi izinzuzo zokubeka phansi phansi kwamamitha
Ubungako obujwayelekile bophahla lwamapulangwe bunjani?
Ukuphakama komhlaba okuphezulu kwe-vinyl
Uyini umehluko phakathi kwesisekelo seplastiki nePVC flooring
Yiziphi izici zokubekwa phansi kwe-pvc?
Kuyini floor PVC futhi kanjani ukukhetha PVC phansi?
Ikhaya　|　Mayelana nathi　|　Isaziso se-copyright　|　Xhumana nathi
Copyright © 2008-2020 ZD Floor Expert Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe